Manchester United iyo Chelsea oo ku tartamaya saxiixa xiddig ay Kooxdiisu ku qiimeynayso 100 milyan oo gini – Gool FM
(London) 06 Feb 2020. Kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa lagu soo warammayaa inay fool ka fool ugu tartami doonaan weeraryahanka Naadiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho marka uu furmo suuqa kala iibsiga.
19-sano jirkan ayaa qaab ciyaareed wanaagsan ku soo qaatay Kooxda BVB xilli ciyaareedkan, isagoo u dhaliyay 15 gool, isla markaana caawiye ka noqday 16-gool 28 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
Agaasimaha ciyaaraha ee Dortmund, Michael Zorc ayaa dhawaan sheegay in Kooxda reer Jarmal weli aysan helin wax dalab ah oo ku aaddan da’yarkaan inkastoo la isla dhexmarayo in addeegiisa lagu tartamayo.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Wargeyska The Sun, Chelsea iyo Man United ayaa qarka u saaran inay dalabyo ka gudbiyaan xiddiga heerka caalami ee dalka England ka hor xilli ciyaareedka 2020-21.
Warbixinta ayaa sheegaysa in Dortmund ay doonayso lacag 100 milyan gini ah ka hor inta aysan aqbalin inay iibiso da’yarkii hore ee Kooxda Manchester City.
Sancho qandaraaska uu kula jiro kooxda ka dheesha Bundesliga ayaa gaaraya ilaa xagaaga 2022-ka, waxaana uu dhaliyay 29 gool, isagoo diiwaan geliyay 39 caawin kale kaddib 83 kulan oo uu u saftay kooxda lagu naynaaso Lucien Favre tartammada oo dhan.
Chelsea iyo Manchester United ayaa sidoo kale la tilmaamayaa inay labaduba xiiseynayaan saxiixa Weeraryahanka Lyon ee Moussa Dembele inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagaan.
Feysal Xasan Xaashi oo la wareegay hoggaanka gooldhalinta horyaalka Somali Premier League